Nagu soo biir - Global ARCH
Global ARCH / Nagu soo biir
Global ARCH waa isbahaysi ururada ka caawiya laabotooyinka iyo cudurada wadnaha lagu dhasho (RHD iyo CHD) bukaanka iyo ururada qoyska. Bukaannada shaqsiyeed, qoysaska, xirfadlayaasha daryeelka caafimaadka, iyo taageerayaasha waxaa lagu dhiirrigelinayaa inay ku biiraan sidii xubno taageersan. Sida Global ARCH xubin waxaad ka heli doontaa fursado aad wax kaga barato hoggaamiyeyaasha CHD iyo RHD adduunka oo dhan. Waxaad sidoo kale fursad uheli doontaa inaad kaqeybqaadato ficil goboleed, heer qaran, iyo heer caalami ah si loo hagaajiyo mustaqbalka qof kasta oo ay saameysay cudurka wadnaha ee ugu horreeya.
Hogaamiyaha loo qoondeeyay urur lehmiyad gaar ah saaraya cudurada wadnaha lagu dhasho ama wadnahaShakhsi jecel inuu taageero Global ARCH
Saxiix ururkaaga xubin ahaan Global ARCH
Noqo mid taageera Global ARCH